လက္ကား cable trunking ပေးသွင်းသူများ, လျှပ်စစ်ပြွန်သုံးထုတ်လုပ်သူ & PPR pick ပေးသွင်း | shingfong
Shingfong သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PVC Trunking, PVC Conduit, PPR ပိုက်များနှင့်ဆက်စပ်သော fittings များတွင်ကျွမ်းကျင်သောထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
PVC Arc ကြမ်းပြင် trunking
PVC Compartment Tranging
PVC အအေးကွေး conduit
PVC နှင့် PPR ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
PVC trunking, PVC Condit, PPR pipe, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
pvc trunking& PVC conduit
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် PVC Trangeing ထုတ်လုပ်သူစက်ရုံ
Shingfong အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် PVC Trange Trange ထုတ်လုပ်သူများ Shingfong တွင် 4pc 4pc များရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ရက်အတွင်း5x 40hq containes5x ကိုတင်နိုင်သည်။Professional PVC trunking ထုတ်လုပ်သူ။၎င်းတို့ကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးစံနှုန်းများနှင့်တင်းကျပ်စွာရနိုင်ပြီးအရည်အသွေးသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များစွာကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်၎င်း၏အရည်အသွေးကိုအာမခံနိုင်သည်။Shingfong ၏ PVC trunking range သည်ပြည်တွင်းနှင့်စီးပွားဖြစ်တပ်ဆင်မှုအပါအ0င်ကေဘယ်ကြိုးစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။ မယူဆသောနှင့်မညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်များကိုစုပ်ယူရန်ကော်အမြှုပ်အရံကူးခြင်းအားရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားသောအရွယ်အစားနှင့်အထူ 200 ကျော်နှင့်အထူတွင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ သူတို့ကဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် fittings အမျိုးမျိုးနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီ truning ကိုသုံးပြီး, အလွယ်တကူ application များအတွက်ဝက်အူနှင့်နံရံကပ်ချိတ်ဆက်ရန်အကြံပြုလိုတယ်။
စျေးနှုန်းချိုသာနှင့်အတူလက်ကား PVC အအေးခံ conduit ပိုက်လိုင်းရန်မိတ်ဆက်
Shingfong Intro သည် PVC အေးခဲသော COND-Bending Conduit ပိုက်လိုင်းနှင့်အတူ Shingfong နှင့်စျေး0ယ်ပါ0င်သော Shingfong တွင်နှစ် 00 မှစတိုင်လ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများမှာ 20 00000 တွင် Twin TwoTs Twicuer Extruer Lines မှ 30 ခုရှိသည်။PVC အအေးခံသော conduit ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုရှာပါ။ လက္ကား Pvc အေးခဲသော Conduit ပိုက်တွင် PPR ပူပူပြင်းသည့်ရေပိုက်များတွင်အထူးပြု, ယခုစစ်ဆေးပါ။
အရည်အသွေးမြင့် PVC Condition ပိုက်လက်ကား - Sihui Shingfong ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd.
Shingfong အရည်အသွေးမြင့် PVC Condition ပိုက်လိုင်း - Sihui Shingfong ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီလီမိတက်, 200x100mm မှ 10x10mm ။ 200pcs ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်အထူ။PVC Conduit ပိုက်
တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး PVC Arc ကြမ်းပြင် Trunking စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ - Shingfong
Shingfong China အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး PVC ARC ကြမ်းပြင် Trunking စက်ရုံထုတ်လုပ်သူများ - Shingfong, OEM / ODM0န်ဆောင်မှုကို PVC Trangearing ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောပုံသဏ္ဌာန်အသစ်များပြုလုပ်နိုင်သည်။Online Inquire! Professional PVC Arc ကြမ်းပြင်ကပ်ခြင်း, PVC ARC ကြမ်းခင်းကြမ်းပြင် trunking, Shingfong ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး PVC trunking
တရုတ်မှ ARC Groove ထုတ်လုပ်သူများ
Shingfong သည် ARC Groove ထုတ်လုပ်သူများကိုတရုတ်နိုင်ငံမှစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသော ARC Groove ထုတ်လုပ်သူ Shingfong သည် 25,000 area ရိယာကိုဖုံးလွှမ်းထားသည်။ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ 1) ပစ္စည်း: PVC ။ 2) စစ်ဆေးမှုစံ - EN 61357: 2007 ။ 3) အငွေ့တန်းခြင်း - ခြစ်ရာမဆိုခြစ်ရာ, အရောင်ကောင်းနှင့်တောက်ပသောထုပ်ပိုးခြင်း, လျောက်ပတ်သောထုပ်ပိုးခြင်း။ 4. အသုံးပြုမှု - ပြည်တွင်းဝါယာကြိုးများအတွက် 1200v အောက်ရှိဝါယာကြိုးကိုကာကွယ်ခြင်း။ အကျိုးသက်ရောက်မှု - အသုံးပြုပြီးနောက်အလွယ်တကူနှင့်ချုံ့ခြင်းများကိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း, ယုံကြည်စိတ်ချစွာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ဖလှယ်ခြင်းအတွက်အဆင်ပြေသည်။ 6) တစ်သက်တာ - သာမန်အသုံးပြုမှုဘ0သည်အနှစ် 50 အထိရှိနိုင်သည်။ 7. အသုံးပြုမှု - လျှပ်စစ်သို့မဟုတ်ဆောက်လုပ်ရေး။ အများသုံး area ရိယာအတွက်ကြမ်းခင်းဝါယာကြိုးနှင့်သင့်တော်သည်။ မည်သည့်အများပြည်သူ area ရိယာအတွက်သင့်လျော်သည်, တယ်လီဖုန်းဝါယာကြိုးများ, ကေဘယ်ကြိုးများတပ်ဆင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ပြပွဲခန်းမများ, ရုံးခန်းများနှင့်လက်လီအဆောက်အအုံများအတွက်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း, ရုံးခန်းများနှင့်အားကစားရုံများ, အားကစားရုံများ, စတိုးဆိုင်များ, စူပါစတိုးဆိုင်များ, အဓိကအင်္ဂါရပ်များ 1. ခိုင်မြဲခြင်း - အကယ်. သင်ကွေးလျှင်ချိုးရန်မလွယ်ကူနိုင်ပါ။ 2. ခဲယဉ်းခြင်း - ဖိအားပေးမှုစွမ်းရည်အောက်တွင်သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 3) မီးခံခြင်း - Flame-retardant PVC ဗဓေလသစ်, အလွန်အမင်းလောင်ကျွမ်းခြင်း, 4. ချေးခြင်းခံမှု - အစိုဓာတ်, အက်စစ်နှင့်အယ်ကာလီခံခြင်း, အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပိုမိုရှည်လျားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာမခံ။ 5) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးမဟုတ်သော - လုံခြုံစိတ်ချရသောစနစ်တစ်ခုကိုအာမခံသော system ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အား insulations ။ 6) တပ်ဆင်ခြင်း - ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ရန်လွယ်ကူပြီးအနီးကပ်တွန်းလှန်ခြင်း,
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် PVC ကြမ်းပြင် trunking ထုတ်လုပ်သူ
Shingfong Professional PVC ကြမ်းခင်းကြမ်းပြင် Trunking ထုတ်လုပ်သူ Shingfong သည် 1995 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး PVC condit piping, ppruit ပိုက်,PVC ကြမ်းပြင် trunking
Badhesive Factory Pay Price ဖြင့်အကောင်းဆုံးတရုတ် PVC Trange Factory - Shingfong
Shingfong Best China PVC Trange Factory ကော်စက်ရုံစျေးနှုန်း - Shingfong တွင် Shingfong သည်အင်အားသုံးအရည်အသွေးကြိုတင်ရောင်းချခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အားမြင့်တက်လာပြီး,အသေးစိတ်အချက်အလက် 1) ပစ္စည်း - PVC ပစ္စည်းအသစ် 2) စံ: IEC 61084-2-1 3) အငွေ့ပျံခြင်း - ချောမွေ့ခြင်းမရှိ, အညစ်အကြေးမရှိ, လှပသောလျောက်ပတ်သောထုပ်ပိုးခြင်း။ 4) အရောင် - စင်ကြယ်သောစင်ကြယ်သော, အရောင်ပြောင်းသွားခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်း။ 5) အနံ့ - ရနံ့, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။ 6. အသုံးပြုမှု - ပြည်တွင်းဝါယာကြိုးများအတွက် 1200V အောက်ရှိဝါယာကြိုးကိုကာကွယ်ခြင်း။ 7. အကျိုးသက်ရောက်မှု - အသုံးပြု. လွယ်ကူစွာတွန့်ဆုတ်ခြင်း, 8. Lifetime - Shingfong PVC ပိုက်များနှင့် PVC trunking of Shingfong တံဆိပ်များသည်အိုမင်းခြင်း, ပုံမှန်အသုံးပြုမှုဘ0သည်အနှစ် 50 အထိရှိနိုင်သည်။
Intro သည် PVC နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Trucking Trucking ထုတ်လုပ်သူများကိုတရုတ် Shingfong မှပြုလုပ်ရန်
Shingfong သည် PVC နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း trunking ထုတ်လုပ်သူများကိုတရုတ် Shingfong မှပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် Shingfong တွင် R ကို SHINGFONG တွင်ပါသောအခွက်တဆယ်ရှိသည်&D, National Hi-Tech Enterprise authentication authenticate certificate ကိုလက်ခံရရှိရန်ဂုဏ်အသရေရှိသည်။PVC နှိုင်းယှဉ် trunking ပေးသွင်းရှာဖွေနေ? Shingfong သည်စက်ရုံစိတ်ကြိုက် PVC trunking တွင်အထူးပြုလုပ်ပါ။
စိတ်ကြိုက် PVC Captment Tranging Tranging ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်မှ
PVC Compartment TrangingShingfong စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော PVC Comparting Trucking ထုတ်လုပ်သူများကိုတရုတ်မှပြုလုပ်ထားသော Shingfong သည် 4pc 4pc များရှိသည်။
ရေအေးနှင့်ရေပူစက်အတွက်အကောင်းဆုံး PPR ပိုက်စျေးနှုန်း မင်္ဂလာပါ
အအေးနှင့်ရေပူထုတ်လုပ်ရန်အတွက် PPR pp ppate, အအေးနှင့်ရေပူများအတွက် PPR ပိုက်နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ကောင်းသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကားလိုင်းပြွန် - Shingfong
Shingfong လက်ကားလိုင်းပြွန်ကောင်းကောင်း Guangdong, Sihui City တွင် Shingfong, Shingfong, Guangzhou Baiyun အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ 90 မီတာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် Guangzhou Port နှင့် Shenzhen Port အနီးတွင်ရှိသည်။1) Shingfong PVC လျှပ်စစ်ပြွန်သည်လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးကိုအဆောက်အအုံတစ်ခုသို့မဟုတ်မြေယာမဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံတွင်အသုံးပြုသောပြွန်ဖြစ်သည်။ 2) Shingfong PVC conduit တွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည့် Rigid Conduit နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သော conduit ရှိသည်။ 3) Shingfong PVC conduit သည်သက်ရောက်မှု, အစိုဓာတ်နှင့်ဓာတုအငွေ့များမှ conductor များကိုအလွန်ကောင်းမွန်သောအကာအကွယ်ပေးသည်။ 4) Shingfong PVC condition ကိုအာဏာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်များကိုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုရန်အဆောက်အအုံများ, အဆောက်အအုံများသို့မဟုတ်ကိရိယာများအကြားမြေအောက်မြေအောက်မြေအောက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ 5. Shingfong PVC conduit ကိုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောရည်ရွယ်ထားသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးပစ္စည်းများရှိသည်။ PVC condition အင်္ဂါရပ် 1) သက်ရောက်မှုနှင့်ဖိအားပေးမှု; 2) ကွန်ကရစ်၌သင်္ဂြိုဟ်နိုင်ပါတယ်; 3) အသက်အိုမင်းခြင်းနှင့်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းမှကင်းလွတ်ခြင်း, 4. DIMPPROOF, အက်စစ်နှင့် alkali ကိုခုခံခြင်း, 5. မီးမှထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက် Shingfong PVC conduit အပေါ်မီးသည်ချက်ချင်းသေသည်။ 6. ရရှိနိုင်သည့် Vatity Dimensions; 7. OEM နှင့် ODM ဝန်ဆောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းခြင်း, 8. အဓိကအမျိုးအစားနှစ်မျိုး - PVC ဖြောင့်ပြား, PVC အအေးကွေးပိုက်။
တရုတ် PPR Tube ထုတ်လုပ်သူ - Shingfong
Shingfong China PPR Tube ထုတ်လုပ်သူများ - Shingfong, Shingfong တို့တွင်အလုပ်သမား 150 ရှိပြီးရှုပ်ထွေးသောထုပ်ပိုးလိုအပ်ချက်နှင့်ပင်တိုတောင်းသောအချိန်၌အမိန့်များကိုအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။အားသာချက် (1) အပူချိန်ခုခံ - အများဆုံးရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောအလုပ်လုပ်သောအပူချိန်မှာ 70 ဒီဂရီ Celsius အထိဖြစ်သည်။ အများဆုံးယာယီအပူချိန်မှာ 95 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိသည်။ (2) အပူထိန်းသိမ်းခြင်း - ကြေးဝါပိုက်ပိုက် 1/1500 နှင့်သံမဏိပိုက်၏ 1/250 ဖြစ်သောအပူစီးကူးမှုနည်းခြင်းနှင့်သံမဏိပိုက် 1/250 ဖြစ်သည်။ အဆိပ်မဟုတ်သော - မည်သည့်မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုပေါင်းများကိုညစ်ပတ်စွာဖုံးအုပ် ထား. ဘက်တီးရီးယားဖြင့်ညစ်ညမ်းစေခြင်းမရှိပါ။ (3) ချေးခံနိုင်ရည်: ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကိစ္စများသို့မဟုတ်အီလက်ထရွန်ဓာတုဗေဒဓာတ်ငွေ့ကိုခုခံတွန်းလှန်ပါ။ (4) အနိမ့်တပ်ဆင်မှုကုန်ကျစရိတ်: အလင်းအလေးချိန်နှင့်တပ်ဆင်ခြင်းလွယ်ကူခြင်းကတပ်ဆင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုသတ္တုပြားစနစ်ပေါ်တွင် 50% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။ (5) မြင့်မားသောစီးဆင်းမှုစွမ်းရည်: ချောမွေ့သောအတွင်းပိုင်းနံရံများသည်ဖိအားဆုံးရှုံးမှုနှင့်သတ္တုပိုက်များထက်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိအားဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပမာဏပိုမိုများပြားသည်။ (6) သက်တမ်းရှည်ခြင်း - ပုံမှန်အခြေအနေများအောက်တွင်အနှစ် 50 ကျော်။ (7) ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ရင်းနှီးသော။
အရည်အသွေးမြင့် PVC trapezoid trunking လက်ကား
အရည်အသွေးမြင့် PVC trapezoid trunking လက်ကား•စံအရှည်: 2000 မီလီမီတာ•စံအရောင် - အဖြူရောင်•ကြီးမားသောကေဘယ်လ်ကာကွယ်မှုကိုပေးပါ• Shock ခံနိုင်ရည်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း thermoplastic•ခဲ - အခမဲ့ပစ္စည်းလက်ခဏာ•ပေါင်းစပ်ထားသော nonskid liners နှင့်ထူးခြားသောအဖုံးဒီဇိုင်းများကပြွန်အဖုံးသည်ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်တုန်ခါမှုကာလအတွင်းလျှောချိန်တွင်မလျှောပါ။•ဝါယာကြိုးနှင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်မပေးနိုင်သောထောင့်များနှင့်အနားများကိုချောချောမွေ့မွေ့ထောင့်များနှင့်အနားများ,•အထူးရေးဆွဲထားသောခဲ - အခမဲ့ PVC ပစ္စည်းသည် Flame နှောင့်နှေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Capartment ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် PVC ကြမ်းကြမ်းပြင် trunking
Compartment ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် 11 PVC Arc ကြမ်းပြင် trunking ။၎င်း၏ function သည်အရည်အသွေးနှင့်၎င်း၏0န်ဆောင်မှုသက်တမ်းနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောချိန်ခွင်လျှာ၌တည်ရှိ၏။Shingfong PVC Arc ကြမ်းပြင် Trunking သည် Prolting Pass Pass နှင့် Properts များ, ဆေးရုံများနှင့်ဘူတာများကဲ့သို့ပင်အများပြည်သူသုံးအများပြည်သူသုံးနေရာများတွင် Properting Mall များ၌ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်တိပ်ဝီယက်နှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ပြွန်၏အောက်ခြေသည်ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ဆွဲချနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး PPR အပူနှင့်အအေးရေပိုက်ပေးသွင်း
အကောင်းဆုံး PPR အပူနှင့်အအေးရေပိုက်ပေးသွင်း။ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုရန်လုံခြုံသည်။ ၎င်းကိုသောက်သုံးရေအသုံးပြုသောလုံခြုံမှုစံနှုန်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။1. Eco-friendly နှင့်ပိုမိုလုံခြုံသောအသုံးပြုမှု, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း2. မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ, ခုခံမှုကိုဝတ်ဆင်, သက်ရောက်မှုခုခံ3. အလေးချိန်, အောက်ပိုင်းစနစ်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်4. ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုဘဝ
Compartment ပေးသွင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး PVC trunking
အခန်းပေးသွင်းနှင့်အတူအကောင်းဆုံး PVC trunking ။အဆိုပါထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြင့်မားမှာစုဝေးနေသည်။Shingfong ၏ PVC Capartment Trunking သည် compartment trunking system ဖြစ်သည်။စွမ်းအင်, ဒေတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကေျာက်စုများကိုနေရာချထားရန်အတွက်ခွဲဝေထားသောအစင်းအားဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ divider fixing points များ၏ရာထူးများသည် installation လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်. အခန်း (3) ခု,
ကော်ကော်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ Professional PVC trunking
ကော်တိပ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ် PVC trunking ။အောက်ပါရှုထောင့်ပါ0င်ခြင်း၏ဒီဇိုင်းအခြေခံမူ။ ဤအခြေခံမူများတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အမြင်အာရုံလက်ကျန်ငွေ, စည်းလုံးညီညွတ်မှု, စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း, အမျိုးမျိုးသော, အမျိုးမျိုး, အဆင့်ဆင့်,ဒီနှစ်ဖက်တဖက်သတ်ကော်တိပ်ဟာမြင့်မားတဲ့အရည်အချင်းမြင့်မားတယ်, တိပ်ခွေတိပ်ခွေကိုတောင်ကိုရီးယားကတင်သွင်းသည်။ အစိမ်းရောင်, အပြာ, အနီရောင်စသည်တို့ကဲ့သို့သောအရောင်များစွာရှိသည်။PVC trunking တွင်ကော်တိပ်ကိုတင်ရန်အတွက်အရည်အချင်းရှိသောကစားသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေးပို့ချိန်ကိုအာမခံနိုင်ကြသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးကော်တိပ်ဖြင့် PVC trunking လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
အကောင်းဆုံး PVC Condit စက်ရုံစျေးနှုန်း -
အကောင်းဆုံး PVC Condition စက်ရုံစျေးနှုန်း - ။ဒါဟာဂရုတစိုက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို RERDIAT ထုတ်လွှတ်ခြင်း, radiated from (လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်မှု,PVC Condit သည်အောက်ပါအရွယ်အစားရှိသည်။10mm PVC condit, အဓိကအားဖြင့် LED ကိုအသုံးပြုမှုအတွက်, ငါတို့က LED ပြွန်လို့ခေါ်တယ်။16mm, အဖြူ, မီးခိုးရောင်, အပြာ, အစိမ်း, အနက်ရောင်, အဝါရောင်စသည့် PVC Condit Pipe အတွက်အရောင်အချို့ရှိသည်။20 မီလီမီတာ, လူကြိုက်အများဆုံးအရွယ်အစား, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ကောင်းစွာရောင်းနိုင်သည်25 မီလီမီတာ, Hot Sale Model, ၎င်းသည်ကိုက်ညီရန်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိသည်32mm, အရည်အသွေးကောင်း40mm,50mm,60mm,အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ Export@shingfong.com
ဤဗီဒီယိုသည်သင့်အား PVC condit pipe ကို socket အာမခံဖြင့်အာမခံထားမည်
ဤဗီဒီယိုသည်သင့်အား PVC condit pipe ကို socket အာမခံဖြင့်အာမခံထားမည်ဒီဗီဒီယိုမှာဒီဗီဒီယိုကသင့်ကိုဒီဗီဒီယိုကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒီဗီဒီယိုကိုခံစားပြီးစာရင်းသွင်းပါ။Sihui Shingfong ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် Polymer ပစ္စည်းများတွင်ပါ0င်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ PVC Cable Trunking, PVC-U ရေနုတ်မြောင်းများ, PVC-U ရေနုတ်မြောင်းပိုက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။Shingfong ကို 1996 ခုနှစ်တွင် Guangdong ပြည်နယ်ဖြစ်သော Siangdong ပြည်နယ် Dongui City of accise ရိယာအကျယ်အ0န်း 68 on acred ကဖုံးလွှမ်းခဲ့သည်။ Shingfong တွင်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 30 ခုရှိပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန်ပေါင်း 30,000 ဖြစ်ပြီးယွမ်သန်း 200 သို့မဟုတ်ထိုထက်မကရှိသည်။အီးမေးလ် - Export@shingfong.comကိုယ့်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ:ကျွန်ုပ်၏0က်ဘ်ဆိုဒ် - https://www.shingfong.comFacebook: https://www.facebook.com/112249170655555505YouTube: https://www.youtube.com/channel/ucie3xabptingq6vuzchwrtvvvsLinkedIn - https://www.linkedin.com/in/sf-pvcrunking-condition-ဤဗီဒီယိုသည်သင့်အား PVC condit pipe ကို socket အာမခံဖြင့်အာမခံထားမည်သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။# ဗီဒီယိုကို # PVC # ပြွန် # ပိုက် # socket # အာမခံ # SF # PVC # စည် # & # ပြွန် # SFPVCTrunking & ပြွန် # 1 / 2drivesocket # Flexi-TilesInterlockingPVCFloorTiles # conduitologist # Checklistofelectricalpipeswork # roundpopsocketwholesale # chennaiuPVC # parallelconduitkicks # Irwinsocketadapter
PVC trunking ထုတ်လုပ်သူများအတွက်နှစ်ဆတဖက်အတ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောတိပ်ခွေ
Shingfong သည် PVC Trange ထုတ်လုပ်သူများအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးတိပ်ခွေများကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းဤရွေ့ကား specantant ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ခိုင်မာသောကော်နှင့်အတူဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။အဖြူ, အနီရောင်, အပြာ, အစိမ်း, အဝါရောင်, လိမ္မော်, ပန်းရောင်စသည့်ကော်တိပ်၏မျက်နှာဖုံးများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။စိတ်ကြိုက်အရောင်ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။တိပ်ခွေအရောင်သည်များသောအားဖြင့်အဖြူသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ပုံမှန်အကျယ်သည် min ဖြစ်သည်။ max မှ 7mm ။ 85mm ။အကယ်. သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ဝင်စားပါက Export@shingfong.com
Sihui Shingfong ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd.
Shingfong လျှပ်စစ်ကြိုးဖြင့်ရှေ့ဆောင် Shingfong& Wiring Trunctioning, Conduit ပိုက်, ရေပေးဝေမှုပိုက်, ရေနုတ်မြောင်းပိုက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ fittings ။ 1996 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ PVC ပိုက်နှင့် trumeing ကိုအိမ်မှမြို့ 150 ကျော်အားအိမ်မှမြို့ 150 ကျော်သို့ရောင်းချနေသည်။ Shingfong အားသာချက် - သင့်စျေးကွက်တွင်သင့်အားပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောထုတ်ကုန်များကိုချွေတာသောထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ထားသည်။ သင်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့0မ်းသာပါသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုရရှိစေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသားအရေအမျိုးမျိုးကိုအမျိုးမျိုးသောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ,
1995 ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shingfong သည် PVC trunking နှင့် PVC Condit ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် 26 နှစ်ကြာပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံရှိသည်
နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည်တန်ချိန် 30000 ဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံး 50x40GP ကွန်တိန်နာများကိုလစဉ်တင်ဆောင်လာသည်
22000 စတုရန်းမီတာ 25000, အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ2ခုနှင့်စစ်ပွဲ3ခု,
OEM / ODM စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းနည်းများ။ outer ထုပ်ပိုး၏အခမဲ့ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှု။
ဝန်ဆောင်မှု, အရည်အသွေး & ရိုးသားမှု
Shingfong သည်ဖောက်သည်များအားတတ်နိုင်သော, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်အမြဲထောက်ပံ့ပေးရန်ကတိက0တ်ပြုခဲ့သည်။ Business Tendiation, အရောင်းအစီအစဉ်ဒီဇိုင်း, စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကဲ့သို့သော Preselles Service အပါအ0င် One-stating0န်ဆောင်မှုများ,
Shingfong အတွေးအခေါ် - သစ္စာရှိခြင်း,
Shingfong ရည်ရွယ်ချက် - အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သော0န်ဆောင်မှုပေးရန်။
Shingfong ရည်ရွယ်ချက်များ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း, ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း,
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ 1995 ခုနှစ်ကတည်းက
PVC trunking နှင့် pvc conduit ၏ twin ဝက်အူဝက်အူ extruders
လစဉ် loading min ။ 50x40HQ ကွန်တိန်နာ
OEM / ODM ဝန်ဆောင်မှုပေးပါ
OEM များအတွက် 200 ကျော်ကွဲပြားခြားနားသောမှို
စိတ်ကြိုက် Shingfong PVC Tranging ယနေ့တရုတ်မှထုတ်လုပ်သူများ
Shingfong စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း Shingfong PVC Trangeing ယနေ့တွင်တရုတ်မှတင်ဆောင်လာသောထုတ်လုပ်သူများ
Intoloto PVC Cable Tranging Shingfong
Shingfong Introto PVC Cable Tranging Shingfong
Shingfong Shingfong ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူမှမီးအိမ်ပွဲတော်အတွက်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဆန္ဒများ
Pvc လျှပ်စစ်လျားပင်စည်ခြင်းလက်ကား - Sihui Shingfong ပလပ်စတစ်ကုန်ပစ္စည်းစက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd.
Shingfong Howquality PVC လျှပ်စစ်လျားပင်စည်ခြင်းလက်ကား - Sihui Shingfong ပလပ်စတစ်ကုန်ပစ္စည်းစက်ရုံကုမ္ပဏီလီမိတက်